admin | Subin Bhattarai
संसारमा सबै मान्छे प्रशंशाको भोको हुन्छ । मेरा मन पर्ने लेखक धुरवचन्द्र गौतम लेख्नुहुन्छ, ‘यहाँसम्म कि चितामा सुतेको मान्छेलाई समेत वाह ! क्या सानदार मृत्यु मर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्यो भने जुरुक्क उठेर मुस्कुराउँदै धन्यवाद भन्छ रे ।’ मान्छेलाई गाँस, बाँस र कपासको आधारभूत आवश्यकतापछि अर्को आवश्यक केही चीज छ भने त्यो सायद प्रशंसा नै हुँदो […]
बिहा सकिन लाग्यो । लामो छुट्टी भइसकेपछि स्कूल जान लागेको बालकको झैं मेरो हालत भएको थियो । भोलि निर्वाण कन्ट्री क्लब, घोपा क्याम्पमा रामेश्वरको बिहाको पार्टी हुँदै थियो । ऊ आउँछे कि आउँदिन ? आई भने त ऊसित पक्कै भेट हुन सक्थ्यो । त्यही एउटा झिनो आशा लिएर म जन्तीसँगै रामेश्वरको घर फर्किएँ । भोलिपल्ट […]
साथीहरूको भीडमा एक जना यस्ता साथी छन्, जो विचित्रै छन् । एक दिन हिँड्दाहिँड्दै बाटोमा अकस्मात् उनी भेटिए । मुहारमा हाँसो, शरीरमा अलौकिक स्फूर्ति देखेर यो अनुमान गर्न समय लागेन कि ती मित्र धेरै नै खुसी छन् । ‘म एकदमै खुसी छु,’ हात मिलाएर हालखबर सम्म साटासाट गर्न पाएका थिएनौँ, मित्रले यसरी खुसी प्रकट गरे […]
Teaser for Monsoon
लेखक संग ५ प्रश्न – Subin Bhattarai
तपाईं लाई कुन नेपाली किताव सम्झिदा “यो किताब चैं मैले लेखेको भए हुन्थ्यो ” जस्तो लाग्छ ? यस्ता धेरै किताबहरु छन् । तर एउटा मात्रै भनेर सोध्नु भो । म यसमा धच गोतामेको “घामका पाइलाहरु” भन्न रुचाउँछु । तपाईं कुन नेपाली किताब को सिनेमा बनेको हेर्न चाहनु हुन्छ ? बिपी कोइरालाको नरेन्द्र दाइ । किताब […]
सुबिन भट्टराई सधैँ पहिले पहिले कथा फुर्थ्यो । म कथा लेख्थेँ । कथा लेखिसकेपछि शीर्षक जुराउन मलाई कन्नुपथ्र्यो । ‘कथाकी पात्र’मा त्यस्तै समस्या भो । संग्रह तयार भइसक्यो, शीर्षक छैन । किताबको लेआउट, डिजाइन भइसक्दासम्म किताबको नाम के राख्ने भन्ने टुंगो लागिसक्या थिएन । अन्त्यमा, बल्ल तल्ल नाउँ जु¥यो– ‘कथाकी पात्र’ । संग्रहभित्रकै एउटा कथालाई […]
छ वर्ष। चारवटा कृति, अनगिन्ती पात्र। लाखौं पाठक/प्रशंसक। हजारौं विरोधी । लेखन यात्राको छ वर्षलाई पछिल्तिर फर्केर जब म हेर्छु, तब धेरै थोक पाएको पनि छु, केही थोक गुमाएको पनि छु। तर जे पाएँ, त्यसले गुमाएका कुरालाई आफ्नो पाइतालामुनि किचेर राखेको छ। वातावरण विज्ञानमा मास्टर्स डिग्री गरेपछि मेरा लागि समय तुसारो र ठिहीजस्तै बनेर आयो। […]
सुबिनको ‘मनसुन’ असोज ८ मा सार्वजनिक हुँदै
काठमाडौं, २ असोज । यूवापुस्ताका लोकप्रिय बनेका साहित्यकार सुबिन भट्टराईको चौथो साहित्यिक कृति तथा तेस्रो उपन्यास ‘मनसुन’ असोज ८ गते विमोचन हुने भएको छ । पाठकले लामो समय प्रतिक्षा गरेको पुस्तकको रिलिज डेट तोक्दै लेखक भट्टराईले पुस्तकको कभर सामाजिक सञ्जालमा राखेर सार्वजनिक गरेका हुन् । समर लभ र सायामा जस्तै मनसुनको कभरमा पनि मोडलको उपस्थिति […]